कुराकानी : कस्तो बन्दैछ, तिरुपति बालाजी धाममा शालग्राम संग्रहालय ? के भन्छन, ऋषि प्रपन्नाचार्य ? – ebaglung.com
२०७५ मंसिर १०, सोमबार १५:३५	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, थप समाचार, विविध
बागलुङ २०७५ मंसिर १० । शालग्राम भन्दा वित्तिकै भगवान विष्णुको स्मरण हुन्छ । हिन्दु धर्मालम्वीहरुले शालग्राम लाई भगवान विष्णुको रुपमा पूजा आरधना गर्दै आएका छन् ।
शाण्डिल्य ऋषि द्वारा संरक्षित गण्डकी नदीहरुमा कालीगण्डकी प्रमुख मानिन्छ । यसमा रहेको शालग्राम पर्वत र दामोदर कुण्डको बीच मुक्तिक्षेत्रमा भगवान विष्णुले गरेको यज्ञको प्रभावले अग्निज्वालाको रुपमा भगवान शिव र शितल जलको रुपमा भगवान नारायण (विष्णु)उत्पन्न भए । भगवान नारायणले सती बृन्दाको श्रापबाट मुक्त हुनका लागी कालीगण्डकी नदीमा शिलाको रुप धारण गरेर मोक्ष प्राप्त गरेका हुनाले शालग्राम शिलालाई साक्षात विष्णु भगवानको रुपमा पूजिदै आएको पौराणिक मान्यता रहि आएको छ । त्यसैकारणले सर्वपाप विनाशिनी मुक्तिक्षेत्रको प्रादुर्भाव भएको हो । यसै कारणले यसको नाम मुक्तिक्षत्र रहन गएको पुराणहरुमा वर्णन गरिएको छ ।
विश्वमानै दुर्लभ मानिने शालग्राम शिलाको संरक्षणको लागि बागलुङ कुँडुले स्थित बागलुङ नगरपालिका–४ कुँडुलेमा रहेको तिरुपति बालाजी धाममा पहल थालिएको छ । मुस्ताङको मुक्तिनाथ देखि म्याग्दी, बागलुङ र पर्वत भएर वग्ने कालीगण्डकी (कृष्णागण्डकी) नदीमा मात्र पाईने शालग्राम शिलाको संरक्षणका लागि यहाँ शालग्राम संग्रहालय निर्माण भईरहेको छ ।
धार्मिक दृष्टिले अतिनै महत्वपूर्ण मानिने शालग्राम शिलालाई संग्रहालयमा व्यवस्थित रुपमा राखिन थालिएको बालाजीधामले बताएको छ । हाल तिरुपती बालाजी धाममा रहेका २४ हजार शालग्रामहरुलाई संग्रहालयमा राखिने भएको छ ।
भगवना शिवको प्रिय अस्त्रका रुपमा मानिने त्रिशुल आकारमा भू–गर्भ भित्र ७६ मिटर लामो शुरुङ निर्माण गरि संग्रहालय बनाउन थालिएको हो । बागलुङ नगरपालिका–४ कुँुडुले फेदी स्थित श्री रङ्गवेंकटेश मुक्तिनारायण मन्दिर, मुक्तिनाथ वेदविद्याश्रम तिरुपति बालाजीधाममा स्वामी श्रीधरचार्यको नामबाट शालग्राम संग्रहालय निर्माण गर्न लागिएको मिन्दरका अध्यक्ष स्वामी ऋषि प्रपन्नाचार्यले बताए ।
‘कालीगण्डकी नदीमा मात्र पाईने शालग्राम चोरी पैठारी हुँदा भविष्यमा शालग्राम हराउदै जाने भन्दै शालग्राम संरक्षणमा जुटेका छौं’ ऋषि प्रपन्नाचार्यको भनाई थियो–‘यस कार्यलाई पूर्णता दिन सबैको सहयोग आवश्यक रहन्छ ।’
अबको एक महिनामा सुरुङ मार्गको काम सकिने र त्यस पछि अन्य भौतिक संरचनाको काम थालिने बालाजीधामले बताएको छ । रु चार करोड रकम जुटाउन आफ्ना तर्फबाट सर्वत्र पहल भइरहेको स्वामी प्रपन्नाचार्यले बताए ।
‘एउटा अर्को पवित्र उद्देश्य राखेर काम थालिएको छ,’ उनले भने, ‘भगवान, तँ आँट म पु-याउछु भन्नुहुन्छ, हामीले आँट गरेका छौ, सबैको साथ सहयोगमा ऐतिहासिक महत्वको आकर्षक शालग्राम संग्रहालय निर्माण गर्न हामी सफल हुनेछौ’ ।
सुरुङको निर्माणको काम साउथ एसियन एन्फ्रा स्टक्चर निर्माण कम्पनीले ठेक्का मार्फत गरिरहेको छ । निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर नरोत्तम कार्कीका अनुसार सेमी सरकल प्रविधिमा निर्माण भएको सो सुरुङको ३ मिटर उचाई र ३ मिटर ७० सेन्टी मिटर चौडाई रहेको छ ।
नदीहरुमा प्रशस्त मात्रामा पाइने शालग्राम लोप हुन थालेपछि यसको संरक्षणका बारेमा धार्मिक व्यक्ति र सम्वद्ध संघ संस्थाहरुले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् । उनले पोखरा काठमाडौ तिर नक्कली शालग्रामहरु बनाएर बढी मुल्यमा विक्री भैरहेको प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकाछन् ।
हिन्दु धर्मालम्बीहरुको लागि कालो रंगको बाटुलो शिला (ढुंगा) शालग्राम अति पूजनीय मानिन्छ । यसका लागि नेपालको पश्चिम कालीगण्डकी नदी प्रख्यात छ । बैष्णवहरु र सनातनीहरुले शालिग्रामलाई साक्षात बिष्णुको अवतारका रुपमा लिन्छन् ।
श्री रङ्गवेंकटेश मुक्तिनारायण मन्दिर, मुक्तिनाथ वेदविद्याश्रम तिरुपति बालाजीधाममा स्वामी श्रीधराचार्यको नामबाट संग्रहालय नामाकरण गरिएका स्वामी श्रीधराचार्य शालग्रामको महत्वबारे ग्रन्थ प्रकाशन गर्ने र संरक्षणका एक अभियन्ता मानिन्छन् । उनको २०५६ सालमा ३९ बर्षको अल्पायुमै निधन भएको थियो । आचार्यका मुक्तिक्षेत्र महात्माय, शालग्राम महात्माय, गोदा सप्तसरी लगायत दुई दर्जन बढी कृति प्रकाशित छन् ।
यहाँ प्रस्तुत छ, ऋषि प्रपन्नाचार्यसंग ईबागलुङका फोटो सम्पादक किरण आचार्यले गरेको कुराकानी: